Sonye aka na mmekorita nke mgbasa ozi anyi |
You bụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi, franchise ma ọ bụ onye na-ahụ maka azụmahịa na-arụ ọrụ na azụmaahịa franchise? Ọ bụrụ otu a, ị nwere ike ịdebanye aha n'okpuru ka ị bụrụ onye mmekọ mgbasa ozi Franchiseek nyere ikike.
Dịka onye mmekọ mgbasa ozi Franchiseek nyere ikike ị ga-enweta ntanetị ego nwezighi ọnụ gafee ndị ahịa gị. Ndị ahịa gị ga-anata mmefu ego kachasị na nchịkọta mgbasa ozi PLUS ị ga-enweta ọrụ na mmefu mgbasa ozi ha!
Ndị ahịa gị na-echekwa ego & ị mepụtara ụzọ na-agafe agafe nke na-aga n'ihu ka onye ọ bụla nweta. Iji tinye aka ka gị na onye mmekọ mgbasa ozi nke Franchiseek nwere ikikere, biko mezue ụdị dị n'okpuru